Waa kuwee 25-filim Telugu sameeyeen ee maalinta kowaad saamiga ugu badan laga helay – Filimside.net
Waa kuwee 25-filim Telugu sameeyeen ee maalinta kowaad saamiga ugu badan laga helay
Mega Power Star Ram Charan filimkiisa Vinaya Vidheya Rama wacdaro aan caadi ahayn ayuu dhigay maalintiisa kowaad asigoo soo xareeyay 42 Crore ganacsigiisa dibad iyo dal la isku daray sidoo kalena bilaabasho weyn ayuu la imaaday.
Marka laga hadlaayo dhul weynaha Telugu AP/Nizam filimka VVR wuxuu kasoo xareeyay 32.40 Crore ayadoo saami ahaan kooxda cajaladaha qeybiyaan ka heleen 26.03 Crore wuxuuna noqday filimka 4-aad ee Telugu ah ee saamiga ugu badan maalinta kowaad kooxda cajaladaha qeybiyaan ka helaan dhul weynaha Telugu.
Haddaba hoos kaga bogo 25-ka filim ee dhul weynaha Telugu AP/Nizam maalinta kowaad saamiga ugu badan kooxda cajaladaha qeybiyaan ka heleen waxaana xogtaan kasoo xiganay shabakada Andhra Boxoffice (ABO):
No.1. Baahubali 2 42.87 Cr
2. Aravindha Sametha – 26.6 Cr #
3. Agnyaathavaasi – 26.36 Cr #
4. Vinaya Vidheya Rama – 26.03 Cr
5. Khaidi No.150 – 23.24 Cr *#
6. Baahubali – 22.4 Cr*
7. Katamarayudu – 22.27 Cr
8. Jai Lava Kusa 21.81 Cr
9. Bharat Ane Nenu – 21.74 Cr
10. Sardaar Gabbar Singh # – 20.92 Cr
11. Janatha Garage 20.49 Cr
12. Rangasthalam – 19.49 Cr
13. DJ 17.92 Cr
14. Naa Peru Surya – 16.28 Cr
15. SPYder – 15.3 Cr
16. Srimathudu # – 14.72 Cr
17. Brahmotsavam 13.06 Cr
18. Bruce Lee 12.66 Cr
19. Nannaku Prematho 12.18 Cr
20. Sarrainodu 10.96 Cr
21. Attarintiki Daaredi * 10.75 Cr
22. Dhruva 10.35 Cr
23. Gautamiputra Satakarni – 9.82 Cr
24. Aagadu 9.74 Cr
25. Temper 9.68 Cr
F.G: * – Calaamada xidigta filimada wataan waxay tilmaameysaa inay sameeyeen Iskoor ka horeeyay xiligii Bahubali.
#- Calaamada afarta geeska filimada wataan waxay tilmaameysaa inay sameeyeen iskoor aan ahayn midka Bahubali.
Waxaa Aqrisay 72
Karan Johar ayaa raali galin biixda ka bixiyay qaladkii uu ka galay Srk Laakiin waxa uu ku mar mar siyooday in Twitter-kiisa wax badan ka qaldan yihin March 23, 2019